Fanefitry ny valanaretina: vita vaksinin’ny Covid-19 ny mpanohitra | NewsMada
Fanefitry ny valanaretina: vita vaksinin’ny Covid-19 ny mpanohitra
Nisitraka ny fanefitra avokoa. “Vita vaksiny ho fiarovana ny Covid-19 izahay sy i Neny ary ireo mpiara-dia ao amin’ny antoko mpanohitra. Tokony hipetraka ho modely hatrany ny mpitarika. Manentana antsika vahoaka malagasy hanao vaksiny ny tenako”, hoy ny filoha teo aloha, Ravalomanana, omaly. Nahavita fanefitry ny Coronavirus tetsy amin’ny foiben’ny Firenena mikambana (ONU) etsy Andraharo izy ireo tamin’izany.
Efa nahavita tahaka izany koa, ny herinandro teo, ary nampirisika ny rehetra hisitraka vaksiny iadiana amin’ny Covid-19, ny mpitantana ny HVM, Rakotovao Rivo sady filoha teo aloha ny Antenimierandoholona, niaraka amin’ny vadiny. “Tokony hanao izany isika hahafahantsika miaina indray ny fiainana andavanandro”, hoy izy.
Efa afaka manao izany avokoa ireo rehetra amin’izao fotoana izao, ho an’ireo 18 taona no ho mikatra. Anisan’izany ny etsy Malacam Antanimena.
Tsiahivina fa tokony ho ny mpanohitra no atao vaksiny voalohany, raha ny nambaran’ny filoha Rajoelina. Nasainy nampanateriny ny minisitry ny Fahasalam-bahoaka any amin’izy ireo indray izany taty aoriana.